डा. केसीसँगको वार्ता सकारात्मक, आज सहमति हुनसक्ने | जनदिशा
डा. केसीसँगको वार्ता सकारात्मक, आज सहमति हुनसक्ने
काठमाडौं । अनसन बसेको २५ औं दिन मंगलबारदेखि सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्रा.डा. गोविन्द केसी पक्षवीच बार्ता शुरु भएको छ ।
मंगलबार साँझ ६ बजे सरकार र डा।केसीका प्रतिनिधिबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा वार्ता सुरु भएको थियो । वार्ता बुधबार विहान ९ गते पुनः बस्ने जनाइएको छ । धेरै विषयमा समझदारी भइसकेको र बाँकी विषयमा बुधबारको वार्ताबाट समझदारी हुने सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बराल र डा. केसी वार्ता टोलीका संयोजक डा. अभषेकराज सिंहद्वारा जारी संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
Previous Previous post: विमानस्थलबाट फेरि समातियो सुन, ५ भारतीय पक्राउ
Next Next post: कलिला बिद्यार्थीलाई अप्राकृतिक यौन क्रियाकलाप गराउने शिक्षक पक्राउ